Canada mere ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị mkpa maka mpaghara ụgbọ njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Canada mere ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị mkpa maka mpaghara ụgbọ njem
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Malite na Ọktoba 30, 2021, ndị njem na -apụ n'ọdụ ụgbọ elu Canada, na ndị njem n'ụgbọ okporo ígwè VIA Rail na Rocky Mountaineer, ga -achọ ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla, na -enweghị oke.
Canada chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 n'ofe ọrụ ọhaneze gọọmentị etiti na ngalaba njem gọọmentị na-achịkwa.
Prime Minista, Justin Trudeau, na osote onye isi ala, Chrystia Freeland, kwupụtara taa nkọwa nke atụmatụ gọọmentị chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19.
Ndị na -ewe mmadụ n'ọrụ na ngalaba njem ụgbọ elu, ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ mmiri nke gọọmentị etiti na -achịkwa ga -enwe ruo Ọktoba 30, 2021 ịgbaso.
Site na mbido oria ojoo COVID-19, anyị kwere nkwa ichebe ahụike na nchekwa nke ndị Canada niile. Ọ bụ ya mere anyị ji gbalịsie ike napụta ọgwụ mgbochi dị mma ma dịkwa mma maka mgbake na -abara mmadụ niile uru. Ekele dịrị nde ndị Canada tụkọtara aka ha ka ha nweta ọgwụ mgbochi, ma ugbu a, pasent 82 nke ndị Canada tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi, Canada bụ onye ndu ụwa na ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19. Dị ka onye na -ewe mmadụ n'ọrụ kacha ukwuu na mba ahụ, Gọọmentị Canada ga -aga n'ihu na -arụ ọrụ idu ndú na nchekwa nchekwa ebe ọrụ anyị, obodo anyị, na ndị Canada niile site n'ịhụ na agbanyere ọtụtụ n'ime ha ka enwere ike ịgba ọgwụ mgbochi.
The Prime Minista, Justin Trudeau, na osote onye isi ala, Chrystia Freeland, kwupụtara taa nkọwa nke atụmatụ gọọmentị chọrọ Ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 gafee ọrụ ọhaneze gọọmenti etiti na ngalaba njem njem nke gọọmentị etiti na -achịkwa.
N'okpuru iwu ọhụrụ a, a ga -achọ ka ndị ọrụ gọọmentị etiti nọ na Ọchịchị Ọha, gụnyere ndị otu ndị uwe ojii Royal Canadian Mounted kwadoro ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ha ka ọ na -erule Ọktoba 29, 2021. Ndị na -achọghị igosipụta ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ha ma ọ bụ ka ha zuo oke A ga -etinye ọgwụ mgbochi na ezumike nchịkwa na -akwụghị ụgwọ site na Nọvemba 15, 2021.
Ndị na -arụ ọrụ n'ime ikuku nke gọọmentị etiti na -achịkwa, ụgbọ okporo ígwè, na ụgbọ njem ụgbọ mmiri ga -enwe ruo Ọktoba 30, 2021, iji guzobe atumatu ịgba ọgwụ mgbochi nke na -eme ka ndị ọrụ nweta ọgwụ mgbochi. Malite na Ọktoba 30, 2021, ndị njem na -apụ n'ọdụ ụgbọ elu Canada, na ndị njem n'ụgbọ okporo ígwè VIA Rail na Rocky Mountaineer, ga -achọ ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla, na -enweghị oke. Gọọmentị na -arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ndị mmekọ dị mkpa iji tinye ọgwụ mgbochi siri ike maka ụgbọ mmiri na -ebugharị tupu ịmalite njem ụgbọ mmiri 2022.
A na -arịọ ụlọ ọrụ okpueze na ụlọ ọrụ dị iche iche ka ha mejuputa atumatu ọgwụ mgbochi nke na -egosipụta ihe ekwuputara taa maka ọrụ ọha ndị ọzọ. Onye isi ndị ọrụ nchekwa ga -enyekwa iwu chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị agha Canada. Gọọmentị ga -anọgide na -eso ndị na -ewe mmadụ n'ọrụ na -arụ ọrụ n'ebe ndị ọzọ gọọmentị na -achịkwa iji hụ na e butere ndị ọrụ na ngalaba ndị a ọgwụ mgbochi.
Site n'ịchọ ọgwụ mgbochi site n'aka ndị ọrụ gọọmentị etiti, ndị njem, na ndị ọrụ na ngalaba ụgbọ njem gọọmentị na-achịkwa, Gọọmentị Canada ga-ebelata ihe egwu COVID-19, gbochie ntiwapụ n'ọdịnihu, yana chekwaa ahụike ndị Canada nke ọma. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ka na -ebute gọọmentị ụzọ ka anyị na -arụ ọrụ ịhụ na mgbake akụ na ụba siri ike wee wuo Canada nchekwa na ahụike karịa onye ọ bụla.